Umaka: ukuloba kwevidiyo | Martech Zone
Umaka: ukuloba kwevidiyo
I-Sonix: Ukuloba Okuzenzakalelayo, Ukuhumusha Nokufaka Izilimi Ngezilimi Ezingama-40 +
NgoLwesithathu, Januwari 6, 2021 NgoLwesithathu, Januwari 6, 2021 Douglas Karr
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, ngabelana ukuthi ngisebenzise ukuhumusha komshini kokuqukethwe kwami ​​futhi kwaqhuma ukufinyelela nokukhula kwesayithi. Njengomshicileli, ukukhula kwezithameli zami kubalulekile empilweni yesiza sami nebhizinisi lami, ngakho-ke ngihlala ngifuna izindlela ezintsha zokufinyelela izithameli ezintsha… futhi ukuhumusha kungenye yazo. Esikhathini esedlule, ngisebenzise iSonix ukuhlinzeka ngokuloba kwe-podcast yami… kepha banayo
ULwesihlanu, July 3, 2020 ULwesihlanu, July 3, 2020 Douglas Karr
Ukufuna inkampani yokuhumusha esezingeni eliphakeme kungenzeka kungabi yinto yokuqala ocabanga ngayo lapho unquma indlela engcono ongayithatha ukuthuthukisa umkhankaso wakho wokukhangisa ngevidiyo, kepha mhlawumbe kufanele kube njalo. Izinsizakalo zokubhalwa kwevidiyo zingakusiza ukuthi wandise ukubukwa nokuxhumana kwezibukeli namavidiyo akho. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi udinga ukuhumusha okunembile nokuthi ubheka wonke umsebenzi ukuqinisekisa ukuthi ukuhumusha okusezingeni. Ikhwalithi ephezulu
NgoLwesine, Septhemba 19, 2019 NgoLwesine, Septhemba 19, 2019 Douglas Karr
Akuvamile ukuthi ngijabule ngobuchwepheshe… kepha iDescript yethule insiza yesitudiyo se-podcast enezici ezithile ezithakazelisa ngempela. Okuhamba phambili, ngombono wami, yikhono lokuhlela umsindo ngaphandle kwesihleli sangempela somsindo. Incazelo ibhala i-podcast yakho, ngamandla wokuhlela i-podcast yakho ngokuhlela umbhalo! Ngibe yi-podcaster evuthayo iminyaka, kepha ngivame ukwesaba ukuhlela ama-podcast ami. Eqinisweni, ngivumele izingxoxo ezithile ezimangazayo